Mogadishu Journal » 2018 » August » 20
Khayre “Waa in aan isla xisaabtannaa oo meel uga soo wada jeesannaa musuq maasuqa”
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha xukuummadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciid Al-adxa, una rajeeyay in ay sannadkaan sannadkiisa ku gaaraan nabad iyo barwaaqo. “Waxa aan dhammaan Ummadda Soomaaliyeed ee...
Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo ku aadan Ciidul Adxa u diray shacabka Soomaaliyeed
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabadda barakaysan ee Ciidul Adxa. Madaxweyne Farmaajo waxa uu Alle uga baryey shacabka Soomaaliyeed iyo Muslimiinta daafaha adduunka ku nool ee u dabbaaldegaya...
Mjournal :-Ciidamadii uu hoggaaminaayay Generaal Caanood ee shalay la wareegay Magaalada Marko ee Caasimadda gobolka Shabeelaha Hoose ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. Ciidamada ayaa shalay ilaa maanta howlgallo ka wadda Xaafaddaha ay ka kooban tahay Magaalada Marko....
Cases of measles in Europe have hit a record high, according to the World Health Organization (WHO). More than 41,000 people have been infected in the first six months of 2018, leading to 37 deaths. Last year there were 23,927 cases and the year before 5,273. Experts blame this...
Mjournal :-Wasiirka Wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay dekedda Magaalada Muqdisho, waxaana uu kulan la yeeshay Madaxda dekedda. Wasiirka ayaa booqday Xafiisyadda Dekedda ee ay ka socdaan shaqooyinka maalinlaha ah, Waxaana uu sheegay in lasii...
Waqtiga uu furmayo Kalfadhiga 4-aad ee Xildhibaanada Golaha Shacabka oo la shaaciyay
Mjournal-Qoraal ka soo baxay Xafiiska Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kalfadhiga 4-aad ee Golaha shacabka uu furmi doono 10-ka bisha September ee bisha soo socota. Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Xildhibaanada ku wargeliyay , in looga baahan...
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya Bari gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyo hubeysan ay weerar ku qaaday qoys reer guuraa ah oo ku sugnaa Inta u dhaxeysa degaanada Godod iyo Gacma fala ee gobolka Mudug. Sidda ay Risaala u xaqiijiyeen dadka ku sugan degaanka...
Mjournal : -Laamaha ammaanka dalka Kenya oo kaashanaya Hay’adaha ammaanka ka shaqeeya ayaa bilaabay qorshe cusub oo dhalinyarada xuduuda Kenya iyo Soomaaliya ku nool ay kaga wacyi gelinayaan ku biirida Ururka Al Shabaab. Hay’adaha ammaanka ayaa si gaar ah u beegsanaya...